Mogadishu Journal » Abwaan C/llaahi Dhoodaan oo ku geeryooday deegaannka Harar ee dalka Itoobiya
Abwaan C/llaahi Dhoodaan oo ku geeryooday deegaannka Harar ee dalka Itoobiya
Mjournal : – Wararka laga hellayo dhulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in alle ha naxatiirteen isbitaal ku yaala magaalada Harar ee dalka Itoobiya uu ku geeryooday Abwaan C/llaahi Macalin Dhoodaan oo ahaa abwaan siweyn looga wada garanayay deegaannada Soomaalida.
Geerida Abwaan Dhoodaan waxaa warbaahinta u xaqiijiyay mas’uuliyiinta maamulka dowlad deegaannka Soomaalida Itoobiya iyo xubno ka tirsan qoyskiisa oo sheegay in u geeriyooday abwaanka xanuun soo food saaray.
C/llaahi Dhoodaan waxaa uu ka mid ahaa hal abuurka Soomaaliyeed ee ku xeel dheeraa gabayada iyo waliba suugaanta, la xiriirta talooyinka, waanada iyo wax tusaaleynta kuwaasoo loo jeediyo shacabka Soomaaliyeed.
Si gaar ah waxaa abwaan Dhoodaan loogu xasuustaa hal abuurkiisa ama maasooyinkiisaloogu magacaabo ‘Jacburka’ oo uu uga gadisnaa abwaanada kale ee Soomaaliyeed.
Waxaa la fillayaa in aaska abaawka uu ka dhaco dhulka dowlad deegaannka Soomaalida Itoobiya sida ay cadeeyeen mas’uuliyiinta Ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Gollaha amaanka QM oo shir ay ku yeesheen New York uga wada hadllay xasilinta Soomaaliya
Madaxweyne Xassan Sheekh iyo wafdi uu hogaaminayo oo saakay u dhoofay magaalada Mombassa ee dalka Kenya